दर्दनाक दीपावली, तीन वर्षीया बालिकाको मुखभित्र पड्काइयो पटाका
एजेन्सी । हिन्दूहरुको महान पर्व दीपावलीले सबैलाई सत्कर्मतर्फ डोर्याउने पर्वका रुपमा लिइन्छ । तिहारले सबैमा भाइचाराको सम्बन्ध विकास गर्ने विश्वास पनि लिइन्छ । तर, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको मेरठ जिल्लामा भएको..
काठमाडौं । श्राइक नामक चरालाई बगरे चरा भनी चिनिन्छ । यसले आफ्नो शिकारलाई समातेर काँडा वा झाडी वा हाँगामा लगेर घोच्ने अनि शिकारको शरीरलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने काम गर्छ । श्राइक चराले..
लक्ष्मी पूजाको साँझ दिल खोलेर झिलिमिली बत्ती बाल्नुस् : कुलमान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रत्नपार्कस्थित केन्द्रीय कार्यालय झिलीमिली बत्तीले सिंगारिएको छ। उज्यालोको प्रतीक दीपावलीको पूर्वसन्ध्यामा प्राधिकरणको भवन यसरी झिलीमिली पारिएको यो पहिलो पटक हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबै..
यसरी लक्ष्मीको पूजा गरे धन कमाउन सकिन्छ, पूजाका लागि कुन समय उत्तम ?
काठमाडौं । नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार धुमधामसँग मनाईरहेका छन् । तिहारको तेस्रो दिन आज लक्ष्मीको पूजा गरेर तिहार मनाईँदै छ । आजको दिन गाईको पूजाका साथमा बेलुका लक्ष्मीको पूजा..
नेपालीहरुको मौलिक संवत् नेपाल संवत्, चीनमा पनि नेपाल संवत्
नेपाल संवतको नयाँ वर्ष शुरू हुने दिन नै नेवारहरूको म्हः पूजा गर्ने भएकाले धेरैजसोलाई यो नेवारहरूको संवत् भन्ने भ्रम छ । तर, नेपाल संवत् शुरू भएको भोलि कात्तिक २२ गते..
अमेरिकाको संसदमा पहिलोपटक चुनाव जित्ने भाग्यमानी यी नेपाली
अमेरिकाको मुलधारको राजनीतिमा पहिलोपटक नेपालीमुलका अमेरिकाबासी नेपालीको प्रवेश भएको छ । मंगलबार सम्पन्न अमेरिकाको मध्यवधी निर्वाचनमा मेरिल्याण्ड राज्यबाट नेपाली मूलका ह्यारी भण्डारी हाउस अफ डेलिगेट्स (मेरिल्याण्ड राज्य प्रतिनिधि सभा सदस्य)मा..
कांग्रेस पार्टीको उपसभापतिमा विजय गच्छदार मनोनित, महासमिति बैठक सर्‍यो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकको मिति सारेको छ । अब महासमिति बैठक आगामी मंसिर २८ गतेदेखि पुस ३ गतेसम्म बस्ने छ । मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले..
रिटायर्ड वन अधिकृतको कमाइ एक करोड ६० लाख, सम्पत्ति ३ करोड ५१ लाख, अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अवकाशप्राप्त वन अधिकृत विनोदकुमार सिंहविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी सेवामा रहँदा गैरकानुनी रूपमा १ करोड ९१ लाख रूपैयाँ सम्पत्ति आर्जन..
डोल्पा । डोल्पामा जीप दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्इ जनाको जीवितै उद्दार गरिएको छ । सदरमुकाम दुनैबाट जुफालतर्फ जाँदै गरेको भे १ च १६१० नम्बरको जीप ठूलीभेरी..
धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्ने चार जना पक्राउ
काठमाडौं । धर्म परिवर्तनका लागि प्रचार गर्दै हिँडेका चार जनालाई वडाप्रहरी कार्यालय बुटवलले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दुई जापानिज् र दुई जना नेपाली महिला छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं..
कुलमानलाई चुनौती दिने कर्मचारी ! जो रंगेहात समातिए
भक्तपुर । अर्बौँ घाटामा रहेकको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेर कुलमान घिसिङले संस्थालाई यही वर्ष नाफामा लगिसकेका छन् । अघिल्ला तिहारहरुमा आधा देश अन्धकार भइरहँदा कुलमानले कमाण्ड सम्हालेसँगै..
मुख्यमन्त्री पौडेल, अब यस्तो विद्युतीय जीप चढ्छन्
काठमाडौं । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चढ्ने विद्युतीय जीप हेटौंडा पुगेको छ । ३ नम्बर प्रदेशमा पेट्रोलियम सवारी साधन पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको प्रदेश-३ सरकारका मुख्यमन्त्रीले विद्युतबाट चार्ज..
काठमाडौं । मानव अधिकारवादी एवं वरिष्ठ वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरको निधन भएको छ । उनको काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा आइतबार दिउँसो निधन भएको अस्पताल स्रोतले बतायो । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई कात्तिक..
हेटौंडा । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितलाई पदबाट हटाएका छन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलसँग स्थापितको विवाद भएको थियो । उनको मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावकारी..
स्याङ्जामा विश्वकप सुरु, ३० देशका एक सय ५० खेलाडी सहभागी
काठमाडौं । स्याङ्जाको भीरकोमा प्याराग्लाइडिङ विश्वकप सुरु भएको छ । शुक्रबार सुरु भएको यो प्रतिष्पर्धा चार दिन चल्ने छ । नेपाल प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याण्डग्लाइडिङ संघ, नेपाल हवाई खेलकुद संस्था तथा बाबु..
गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरे
काठमाडौं । वातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले संसारमै पहिलोपटक राष्ट्रकवि माधव घिमिरेसँगै नेपालका प्रतिष्ठित नेपाली कलाकारको स्वरमा रेकर्ड भएको गीत गिनिज वल्र्ड रेकर्डमा दर्ता भएको छ । ०७३ जेठ ६..
झापा । एउटा सामान्य परिवारका लागि डेढ दशकअघि एक लाख १५ हजार रुपैयाँ जुटाउन निक्कै हम्मेहम्मे पर्थ्यो । त्यस्तै परिवारमा हुर्किएका व्यक्ति हुन् बाह्रदशी गाउँपालिका–३ राजगढका तुलसीप्रसाद ढकाल । आर्थिक अवस्था..
शिक्षकले पढाइरहेका बेला बाहिर निस्कन्छौ भन्दै गएका ३ किशोरीले गरे विष सेवन
बुटवल । गुल्मीको एकै विद्यालयका तीनवटी छात्राले आज दिउँसो एकैसाथ विष सेवन गरेका छन् । रेसुङ्गा नगरपालिका ११ को सिमिचौरस्थित भगवती माध्यामिक विद्यालय कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्राहरुले विष सेवन..
काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज गुजरातमा भारतका तत्कालीन नेता बल्लभभाइ पटेलको सालिक अनाबरण गरेका छन् । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार यो सालिक विश्वकै सबैभन्दा अग्लो सालिक हो । यसको निर्माण..
राजधानीमा फेरि दिउँसो टिपर चल्ने, देउसी १० बजे रातिसम्म
काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म ट्रक तथा टिपर सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका सुरक्षा..
नेकपा र कांग्रेस कार्यकर्ताबीचको झडप, गोली लागि कांग्रेस कार्यकर्ताको मृत्यु
काठमाडौं । सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका ४ मा आज बिहान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। झडपमा परी एक जनाको मृत्यु भएको हो। झडपका क्रममा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता..
एनएमबी बैंकभित्रैबाट कसरी चोरियो १७ लाख रुपैयाँ
काठमाडौँ । आइतबार अपराह्न शेरबहादुर गुरुङ झापाको बिर्तामोडस्थित एनएमबी बैंकमा रकम जम्मा गर्न पुग्छन्। गुरुङ डिपोजिट भौचरमा विवरण भर्न व्यस्त हुन्छन्। भौचर भरिसकेर अर्को कुर्सीमा आफूले राखेको झोला हेर्दा त्यसमा पैसा..
१८९ यात्रु सवार ७३७ बोइङ विमान समुद्रमा दुर्घटनाग्रस्त
काठमाडौं। इन्डोनेसियाको जाकार्ताबाट उडेको लायन एयर फ्लाइट जेटी-६१० बोइङ विमान उडेको केही बेरमै दुर्घटनामा परेको छ। इन्डोनेसियाकै पङकाल पिनाङका लागि उडेको ७३७ बोइङ विमानमा १८९ यात्रु रहेको बताइएको छ। विमान दुर्घटनामा परेको..
हरेक हप्ता दुई नयाँ अर्बपति उत्पादन गर्दै चीन, कति भए अर्बपति ?
एजेन्सी । चीनले हरेक हप्ता २ जना नयाँ अर्बपति उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । स्वीस बैंक यूबीएस र लेखा परीक्षक पीडब्ल्यूसीको रिपोर्टका अनुसार सन् २०१७ देखि नै चीनले हरेक हप्ता..
भूकम्प पीडितका लागि सरकारको २ प्रतिशत ब्याज दरको ऋण बन्द
काठमाडौँ। सरकारले भूकम्पपीडितलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहकालागि एक अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गर्न लागेको छ। यस कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याज सरकारले नै तिरिदिने गरी भूकम्पपीडितलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गरिने..
जुम्ला । अदानचुली गाउँपालिका–४ बिगुठी हुम्लाकी १० वर्षीया बालिका रमिला बुमी गत असोज पहिलो साता आफ्नै कोदोबारीमा लगाएको काँक्रो खान गएकी थिइन्। दुर्भाग्यवशः काँक्रो खान गएकी उनी मिनेटभरमै गोली खाएर..
अर्जेन्टिनालाई थप ५६ अर्ब अमेरिकी डलर कर्जा दिन आइएमएफ सहमत
एजेन्सी । आर्थिक सङ्कटबाट अघि बढेको अजेन्टिनालाई दिइदै आएको कर्जालाई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले ५६ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भएको छ । आइएमएफको कार्यकारी समितिले आर्थिक तथा मुद्रा गिरावटको..
जापान र चीनबीच ५०० वटा व्यापारिक सम्झौता, २ अर्ब ६० करोड डलरको व्यापार गर्ने
एजेन्सी । जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको चीन भ्रमणका क्रममा शुक्रबार चीन र जापानबीच दुई अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरको व्यापार सम्झौता भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कारण व्यापारिक..
काठमाडौँ । हेलीको पुच्छ्रेताराका कारण हुने मृगशिरा उल्का वर्षा आज राति १०ः४५ बजेदेखि सोमबार बिहान ५ः४५ बजेसम्म देखिने भएको छ । उल्का वर्षाको स्रोत मृगशिरा ९ओरायन० तारामण्डलमा भएको जस्तो देखिने हुनाले..
डिभी बारे अमेरिकी दूतावासले जारी गर्‍यो यस्तो सूचना
काठमाडौं । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भिसा कन्सल्टेन्सीको लहैलहैमा लागेर नक्कली प्रमाणपत्र पेश नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै दूतावासले भिसा कन्सल्टेन्सीहरूको लहैलहैमा लागेर नक्कली प्रमाणपत्र पेश..
Results 1994: You are at page 23 of 67